सूचना/प्रविधि Archives - नेपाल दृष्टि
२९ फागुन, काठमाडौं । एक साता अघि भरतपुरको एलाइभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका बुटवलका पिताम्वर सापकोटाको टाउकोमा रगत जमेको छ । सोमबार राति ८ बजे अप्रेशन गर्ने तय भएको थियो । डा. बालकृष्ण थापा सोमबारसम्म चितवन आइपुग्ने र राति अप्रेशन गर्ने तयारी थियो । तर, अफसोच डा. थापा आएनन् । बेड नम्बर ३१२ मा भेटिएका ७४ वर्षीय सापकोटा भन्छन्, ‘हिजो मेरो अप्रेशन गर्ने कुरा थियो तर, डाक्टर सा’ब त भगवानको अप्रेशन गर्न जानुभएछ ।’ डा. थापा न्यूरो सम्वन्धी सम्मेलनमा भाग लिन फागुन २५ गते बंगलादेशको राजधानी ढाकातर्फ गएका थिए । उनी आइतबार नै काठमाडौं फर्कने तालिका थियो । तर, कारणवस आइतबार आएनन्, सोमबारको टिकट लिए । तर, डा. थापासहित ७१ जना सवार यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो । काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै बुद्ध एयरको फ्लाइटबाट चित
अपर त्रिशुली -१ को पीपीए डलरमा भयो भन्नासाथ विवाद आयो । यो पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा कसैले बोल्ने बाटै छैन । चाइनिज वा अरु डेभलपर्सले नै भन्नुस्, कसैले बोल्ने बाटो नै छैन । यो मोडलमा आउँछन् भने जति पीपीए गरे पनि जोखिम छैन । हुन सक्छ, भोलि हामीले धेरै पीपीए वैदेशिक लगानीमा गर्न नसक्ने हुन सक्छ । विनिमय जोखिमभन्दा पनि भोलि शोधनान्तरका कुरा आउन सक्छ । आखिर डलर त तिनुपर्छ नि, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ, २/३ हजार मेगावाटको पीपीए गर्दा । अहिलेको अवस्थामा जस्तो कोरियनकै लगानीको कुरा गर्नुस् । १० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । १० वर्षसम्म लगानी गरेर बसिराछ । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ? यो आयोजना यति राम्रो आयोजना छ, यति नजिकै, काठमाडौंलाई सीधै ज
काठमाडाैं, फागुन २८ - सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको यूएस बंगला विमानका पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच भएको सम्वाद सार्वजनिक भएको छ । संवादमा जिरो २ र २ जिरोमध्ये कुन ठाउँबाट विमान अवतरण गर्ने भन्नेबारे लामो बहस सुन्न सकिन्छ । कन्ट्रोल रुमले २ जिरोबाट अवतरण गर्न भनेपनि पाइलटले २ जिरोमै अवतरण गराउँछु भनेपछि अन्त्यमा कन्ट्रोल रुमले अनुमति दिन्छ । तर अवतरणलगत्तै विमान दुर्घटना हुन पुग्छ । विमानस्थलको जिरो २ र २ जिरो भनेको के हो त ? विमानस्थल कार्यालयका अनुसार उत्तरतर्फबाट अवतरण हुने ठाउँ २ जिरो र दक्षिणतर्फबाट अवतरण हुने ठाउँ जिरो २ हो । विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दक्षिणतर्फ अर्थात कोटेश्वर क्षेत्रबाट विमान अवतरण गर्ने गर्छन् । कहिलेकाहीँ उत्तरतर्फ अर्थात पशुपति क्षेत्रबाट पनि विमान अवतरण गराइन्छ । उडान पनि यसैगरी हुन्छ । धेरैजसो उडान दक्षिणतिरब
२७ फागुन, काठमाडौं । फौजी शक्तिका हिसावले अमेरिका पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रो स्थानमा रुस र तेस्रो स्थानमा चीन छ भने भारत चौथो स्थानमा पुगेको छ । विश्वको आधुनिक बल र फौजी शक्तिबारे विश्लेषण गर्ने सोध संस्थान ‘ग्लोबल फायर पावर‘ले २०१७ को फौजी शक्तिका हिसावले १३३ देशको सूची जारी गरेको छ । यसमा परम्परागत युद्ध हतियार र उपकरणको मात्र विश्लेषण गरिएको छ । परमाणु हतियार सामेल छैन । यो सूचीमा नेपाल पनि अटाएको छ । नेपाल ९७ औं स्थानमा छ । पुछारमा भुटान छ । पाकिस्तान १३ औं नम्बरमा फ्रान्स र बेलायत भारतभन्दा पनि पछि छन् । बीबीसी संवाददाता शकील अख्तरका अनुसार पाकिस्तान विश्वको १३ औं सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा फौज भएको मुलुक हो । रक्षा बलको सन्दर्भमा पाकिस्तानले सन् २०१७ मा केही क्षमता विस्तार गरेको थियो । अमेरिकाको रक्षा बजेट ५८७ अरब डलर छ जबकी चीनको १६१ अरब डलर रक्षा बजेट रहेको छ । चीनमा सक्
२७ फागुन, काठमाडौं । फौजी शक्तिका हिसावले अमेरिका पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रो स्थानमा रुस र तेस्रो स्थानमा चीन छ भने भारत चौथो स्थानमा पुगेको छ । विश्वको आधुनिक बल र फौजी शक्तिबारे विश्लेषण गर्ने सोध संस्थान ‘ग्लोबल फायर पावर‘ले २०१७ को फौजी शक्तिका हिसावले १३३ देशको सूची जारी गरेको छ । यसमा परम्परागत युद्ध हतियार र उपकरणको मात्र विश्लेषण गरिएको छ । परमाणु हतियार सामेल छैन । यो सूचीमा नेपाल पनि अटाएको छ । नेपाल ९७ औं स्थानमा छ । पुछारमा भुटान छ । पाकिस्तान १३ औं नम्बरमा फ्रान्स र बेलायत भारतभन्दा पनि पछि छन् । बीबीसी संवाददाता शकील अख्तरका अनुसार पाकिस्तान विश्वको १३ औं सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा फौज भएको मुलुक हो । रक्षा बलको सन्दर्भमा पाकिस्तानले सन् २०१७ मा केही क्षमता विस्तार गरेको थियो । अमेरिकाको रक्षा बजेट ५८७ अरब डलर छ जबकी चीनको १६१ अरब डलर रक्षा बजेट रहेको छ । चीनमा
२२ फागुन, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट ठगी भएको घटनादेखि लिएर गोप्य तस्वीरहरु सार्वजनिक हुँदा उठिवास लागेको विषय अब नेपाली समाजमा नौला रहेनन् । तर, बुधबार प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले उब्जाएको एउटा फरक अपराधको रहस्योद्घाटन गरेको छ । फेसबुकको ‘ग्रुप’बाट सुरु भएको विवादले कक्षा १० मा पढ्ने एक विद्यार्थीको हत्या भएको रहस्य सार्वजनिक भएको हो । हिमालय बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने १६ वर्षीय कुमार सूचिकारकाे साथीहरुबाट हत्या भएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुका प्रमुख डीएसपी विश्वराज थापा भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट देखिएको अपराधको यो नौलो रुप हो ।’ सामाजिक सञ्जालले मानिसहरुलाई कति क्रुर बनाइरहेको छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको उनको भनाइ छ । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १० जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका सबै १६ देखि २० वर्षका छन् । पक्राउ पर्नेमा तारकेश्वर
संसारका कतिपय स्थानमा फोरजी नेटवर्क पुगेको छैन तर वैज्ञानिकहरुले चन्द्रमामा फोरजी नेटवर्क पर्याउने महत्वकांक्षी योजना अघि बढाएका छन् । भोडाफोन जर्मनी र नोकियाको सहकार्यमा चन्द्रमामा फोरजी नेटवर्क सञ्चालन गर्न लागिएको हो । जसले गर्दा रोबोटको सहायताबाट चन्द्रमाको लाइभ भिडियो खिच्न सकिनेछ । यो नेटवर्क बर्लिनको पार्ट टाइम(पीटी) साइन्टिस्ट नामक कम्पनीको सहयोगमा बनाइनेछ । चन्द्रमामा मानव पाइला राखेको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा चन्द्रमामा फोरजी नेटवर्क राख्न रोबोट पठाउन लागिएको हो । सन् १९६९मा नील आर्मस्ट्रंग र एडविन एल्ड्रिनले पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए । भोडाफोन जर्मनीको आधिकारिक रिपोर्टका अनुसार आउँदो वर्षमा चन्द्रमामा फोरजी नेटवर्क जोडिने छ । यसका लागि भोडाफोनले काम थालिसकेको छ । कम्पनीले नोकियासँगको प्राविधिक सहकार्यमा यस्तो महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको हो । पीटी
काठमाडौं, फागुन १६ – होलीको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई छुट दिने भएको छ । टेलिकमले बिहीबारदेखि चैत १ गतेसम्म टेलिफोन शुल्क तथा इन्टरनेट शुल्कमा छुट दिने भएको हो । जिएसएम प्रिपेड प्रयोगकर्ताले ३५ रुपैयाँमा ३ दिनसम्म राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म अनलिमिटेड फोन गर्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । यस्तैे ५० रुपैयाँमा २४ घन्टासम्म अनलिमिटेड इन्टरनेट डाटा र राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २५ रुपैयाँमा १ जिबी डाटा पाइने टेलिकमले जनाएको छ । यस्तै २५ रुपैयाँमा १ घन्टासम्म फोन, एसएमएस र डाटा चलाउन सकिनेछ । यसको लागि जीएसएम मोबाइलबाट स्टार १४१५ ह्यास डायल गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
गुगललाई भारतले लगायो २ अर्ब जरिवाना
काठमाण्डौँ, कम्पिटिसन कमिसन अफ इण्डियालाई गुगलले नेपाली २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । भारतको कम्पिटिसन कमिसन अफ इण्डियाले गुगलमाथि १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख भारु जरिवाना गरेको हो । अनलाइन सर्च तथा विज्ञापन बजारमा आफ्नो मजबुत स्थितिको दुरुपयोगका विषयमा दोषी ठहर गर्दै उक्त जरिवाना गरिएको समाचारमा जनाईएको छ । सन् २०१२ मट्रीमोनी डट कन र कन्जुमर युनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसाइटीले सीसीआईमा गुगल विरुद्ध उजुरी दायर गरेको थियो । सो उजुरी उपर सुनुवाई गरेरसिसिआइले यस्तो आदेश दिएको हो । गुगलले प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधि गरेको सिसिआईले ठहर गरेको छ गुगलले अनलाइन सर्चमा आफ्नो बलियो उपस्थितिको दुरुपयोग गर्दै सर्चमा पक्षपात तथा हेरफेर गर्ने गरेको आरोप लगाईएको छ । यसअघि गत बर्ष पनि अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोपमा गुगलमाथि १ करोड भारु जरिवाना गरिएको थियो ।